Issuu: Chishandiso chekushambadzira, Kwete Magazini chete Martech Zone
Issuu inowanzo kuve yakabatana ne inobudirira pamhepo pekugara magazini indasitiri, kuwedzera fashoni magazini, uye mamwe mapoka eniche anofarira. Asi Issuu, neyakareruka-kugadzira PDF mafiripi mabhuku, inogona kuve yakakosha kushambadzira & bhizinesi rekuvandudza turu zvakare. At KA + A, apo isu tichiramba tichiwedzera vatengi vedu-base, Issuu yave nzira yekugovana basa redu nevanhu munyika yose.
Yakatanga nebhuku reposifodhi ratakange tagadzira tikadhinda mumabatch madiki tichishandisa Mashoko okukwezva (chimwe chishandiso chikuru). Isu takada chiitiko chekunyudza chebhuku - huremu hwayo mumaoko ako, iwo akatsetseka matte mapeji, uye kubhurawuza pazororo rako. Sezvo isu patakatanga kudhinda, kugovana uye FedEx'ing aya mabhuku kutenderera nyika, takaona isu taida imwe nzira yekugovana zvirimo. Iyo yakachena yekudhinda zano ishoma, kungave nemutengo, kurerukirwa kwekuvandudzwa, kana nguva yekuendesa. Isu taida nzira yekuendesa chiitiko chebhuku, pane-kudiwa.
Isu takawana mhinduro yedu muIssuu, dhijitari yekuburitsa chikuva iyo yakatigonesa kugovana basa redu nevateereri vakafararira uye tichiri kuendesa chiitiko chakakura. Issuu anochengetera mamwe ehunhu hwakanaka kwazvo mubhuku renyama (rinonyudza uye rinobatika) uye anorizadzisa nemasimba epuratifomu yepamhepo (inokurumidza kugovana, nyore kugadzirisa uye nemutengo wakaderera). Vashanyi vanogona kunongedza kuburikidza neiyo yakazara-skrini vhezheni ye bhuku redu online (zvione pazasi!), uye govana mapeji (kana iro rese bhuku) neshamwari dzavo nevavanoshanda navo. Kunyangwe isu tichibvuma, zvakaoma kutsiva kukanganiswa kweiyo kopi yehusiku kopi yebhuku, kune akawanda mamiriro, Issuu inoshanda zvakanyanya uye yakafara kusvika - uye ndizvo zvinoita kuti tirambe tichishandisa chishandiso.
Vhura bhuku - Mahara kutsikisa - More muchiso
Tags: business developmentContent MarketingdigitaalinennyayaMarketingkutsikisa
Rwendo rweEndaneti kuInbox
Apr 26, 2012 pa 12: 00 AM
Ndanga ndichitaura nemutengi nhasi uye ndikagovera iyi post, Janneane. Vanodhinda matani emhando yepamusoro mabhurocha pamitsetse yavo yechigadzirwa. Iyi ingave nzira yakanaka yekugovera iwo mabhurocha nedhijitari nevateereri vavo. Ndatenda nekuda kwechinyorwa chino - tekinoroji yakanaka chaizvo uye ndinoda bhurocha reKA+A… Ndinotarisira zuva randaizoshanda nechikwata chenyu kugadzirisa mhando dzedu!